रवि लामिछानेको पार्टी दर्ताबारे के भन्छ निर्वाचन आयोग ? « Dainik Online
रवि लामिछानेको पार्टी दर्ताबारे के भन्छ निर्वाचन आयोग ?
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार २ : ०५
काठमाण्डौँ। ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरी दर्ता पाऊँ भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेविरुद्ध दुई वटा निवेदन परेपछि उनको पार्टी दर्ता हुन्छ या हुँदैन आम नागरिकमा जिज्ञासा छ।
उजुरीकर्ताले स्वतन्त्र शब्दको आफ्नै महत्व भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र नागरिकको अधिकार हनन् हुने गरी रविले पार्टी खोलेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका छन् । यसरी उजुरी दिनेमा काभ्रेका मनोज पण्डित र विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहलगायत चार जना र स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा संयोजक डम्बर साहु छन्।
यसपछि अहिले आयोगले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ । धेरैले आयोगको औपचारिक निर्णय पर्खेका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगले के भन्छ त ? आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दुवै निवेदनसंगै राखेर प्रकृया अघि बढिरहेको बताउदै चाँडै यसबारे बताइने बताए।
दल दर्ताको निवेदन परेपछि ४५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो समयावधिभित्र सबै कुरा थाहा हुने उनले बताए। रविको पार्टी सम्भतहः दर्ता हुन नसक्ने धेरैको बुझाई छ । रविले स्वतन्त्र शब्द हटाएर अरु कुनै शब्द राखे मात्र दर्ता हुने जानकारहरु बताउँछन्।